Sahan lagu ogaaday in labada gacmood mar qura wax lagu wada qori karo! | HimiloNetwork
Sahan lagu ogaaday in labada gacmood mar qura wax lagu wada qori karo!
Posted by: Zakariya in Sahanka November 1, 2017	0 181 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Iskuul ku yaalla xaafadaha fog ee dalka Hindiya ayaa dareenka warbaahinta kusoo jiitay markii 300 oo ardaydiisa kamid ah la ogaaday inay leeyihiin awoodda ay labada gacmood – mar qura – wax loogu qori karo.
Warbixin ayaa lagu muujiyo in 1% adduunka oo dhan laga heli karo dadka mar qura wax ku wada qori kara. labada gacmood oo loogu yeero ambidextrous, hayeeshe helaha iskuulka Veena Vandini ee degmada Madhya Pradesh wuxuu isku dayayaa inuu aragtidaas bedelo.
Askari hore oo katirsanaa xoogga dalka Hindiya, VP Sharma wuxuu sheegay inuu aad ugu riyaaqay Rajendra Prasad madax-weynihi ugu horreeyey ee Hindiya kaas oo labada gacmood wax ku wada qori jiray.
“Waxaan aqriyay sheekadiisa, waxaana ay igu dhiirri-gelisay inaan isku hayo,” ayuu yiri. “Markii aan degmadayda ka furay iskuulka, waxaan isku dayay inaan dhaqan-geliyo.”
“Bilowga hore ee fasalka ayaan u diyaarinaa si ay ugu danbayn dugsiga horraantiis u awoodaan inay labada gacmood wax ku qoraan. Laba qoraal ayay isku mar labada gacmood ku wada qorayaan.”
Sharma wuxuu sidoo kale rumeysan yahay in xirfaddani ay ardayda ku kaalmaynayso barashada luqadaha. In kasta oo si ballaaran loo aaminsan yahay inay baraarugga qeyb libaax leh ka qaadanayso, daraasado cusub ayaa tilmaamaysa in tallaabadani maskaxda halis ku noqon karto.
Daraasad lagu sameeyey waqooyiga Finland ayaa lagu sheegay in labada gacmood oo mar qura wax lagu wada qoro ay halis ku tahay maskaxda, dhibaato dhinaca luqadda ahna ay keeneyso.
Xigasho – radiohimilo.so
Previous: Jaceyl ma loo dhintaa?! (Qisso Jaceyl ah oo xanuun badan).
Next: 02 October – Maalinta Caalamiga ee Kahor-tagga Xadgudubka ka dhanka ah Wariyayaasha.
Deegaan carruurta ku dhalata ay ku dhashaan xaalad timo la’aan ah.
Harada Jaceylka ee Dubai.
Toddobo hab-dhaqan oo dhaawac ku noqon kara mustaqbalka qofka.
Tacsi Tiiraanyo leh!!
Wiil waayay lugihiisa xilli isaga oo sameecad dhagaha ugu jiraan ku jiifay jid tareen
Gabar ku fashilantay inay hanato saaxiibkeed xilli ay 30 jeer qalin ugu gashay qancintiisa.
Muslimiin si maalinle ah u quudiya Darbi-jiifta Australia.
Kaalin sidee ah ayay soo galeen goobaha lagu xanaaneeyo carruurta?!